Aaway Makhaayadihii Adeegga Kali ahaa? | Martech Zone
Aaway Makhaayadihii Adeegga Kali ahaa?
Monday, June 25, 2007 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Mararka qaarkood waxaan hayaa fikrado bilyan-dollar ah. Nasiib darro (ama nasiib wanaag), Marnaba ma haysto lacag aan ku maalgeliyo fikradahayga bilyan-doolar in kastoo. Waxaan rajeynayaa in qof i kor qaado kan.
Waxaan ahay miisaan culus. Waa isku-dhaf caadooyin cunid xumo iyo qaab-nololeed deggan. Labadaba aniga ayaa khaladka leh. Markaan u baxaana inaan wax cuno, meel kasta oo aan aado, cabirka adeegyadu waa weyn yahay. Xitaa haddii aan dalbado qayb yar oo veggie ah, waa ugu yaraan 2 jeer. Ma ogtahay iskucelceliska Mareykanka ee makhaayad ka adeegtaa inay ku saabsan tahay 5 jeer cabir qaadasho caadi ah? Hoog!
Ma aha inaan cuno saxanka cuntada oo dhan, waan ogahay. Waa inaad qirataa inay ku dhowdahay suurtagal maaha inaad isku daydo inaad xisaabiso inta adeeg ee dhab ahaan saxanka ku jirta…. hmmm.
Marka waa tan fikradayda! Qof waa inuu furaa makhaayad loo yaqaan "Single Servings". Xaqiiqdii, waanu labisan karnaa magaca, laga yaabee "Une Assiette" halka ay taarikada waaweyn ku jiraan oo adeegyadu ay yihiin kuwo keliya. Waxaan rumeysanahay inay jiraan sababo dhowr ah sababta silsiladda makhaayad sidan oo kale ah u guuleysan doonto:
Ragga duugga ah ee ila midka ahi waa inay halkaas u aadaan qado si ay u muujiyaan inaan dadaal sameyneyno.
Cunto yar, qiimo isku mid ah! Taasi waa faaiido ka weyn halkii rodol.
Cunto yar, cunto kariye dhakhso ah! Taasi waa miisas badan oo saacaddii la iibiyay.
Haddii aanan halkaas u aadin qadada, dadka caatada ah ee shaqada jooga ayaa igu cadaadin lahaa inaan tago sidaa darteed waxay muujinayaan inay daneynayaan. Sida marka ay i weydiiyaan haddii aan doonayo inaan u tamashle tago qado. 😉
Shirkadaha doonaya in shaqaaluhu u cunaan caafimaad waxay ka dalban karaan oo keliya makhaayad sidan oo kale ah.
Calaamadaha loogu talagalay Une Assiette way fududaan lahayd, sax? Waan jeclahay, Ka fogow Assiet Weyn oo leh Une Assiette! ”. Qofkasta oo runti qaata fikradan oo lasocda, waan ku faraxsanahay in cunnada oo dhan la mariyo.
Fadlan ku dar macmacaanka.
Thor Schrock: Internet Millionaire Xiga?
Maareynta Wax soosaarka: Aamusnaanta waa Guusha inta badan aan abaal-marin la siin
Jun 25, 2007 at 8: 54 PM
Waxaan fikrad ka haystay isla xariiqyadaas hal mar, kaliya dufanka yar. Makhaayada ayaa loogu yeeri lahaa Jack Sprats. Si uun, uma maleynayo inay shaqeyn laheyd. Aniga, waxaan noqon lahaa saqaf haddii aan ku ordo mashiinka treadmill-ka si aan u xoojiyo kumbuyuutarkayga.
Jun 25, 2007 at 9: 20 PM
Haye, waxaan kula socdaa inta cabirka la bixinaayo. Ma garanayo sababta ay makhaayaduhu ugu maleynayaan in haweenku ay u cunaan sida gacmaha beeraha maalin mashquul badan ka dib! Waxaan jecelahay adeegyo yaryar oo taabasho macmacaan leh.
Waxaad ku yareyn kartaa cabirka calooshaada qashin yar.
Warka ugu fiican ayaa ah inaad jimicsi ka heli karto adigoo ku socda 18ka god ee ku yaal goobta golf!
Jun 25, 2007 at 10: 41 PM
haha .. waan jeclahay qoraalka ehm .. waxaan ula jeedaa fikradda.
btw, haddii aad wax ka cuni karto makhaayada sidaas badanaa, waxaad qaadan kartaa waqti aad ku aado qolka jimicsiga sax? 🙂
Jun 26, 2007 saacadu markay ahayd 8:05 AM
Xaqiiqdii waad saxantahay! Si daacadnimo ah, xitaa uma baahni qolka jirdhiska bar kaliya baararka tuke si aan dabada uga soo saaro dabada oo aan u socdo. Waan ka shaqeynayaa. Waxay u muuqataa in badan oo aan wax ka qoro, inbadan oo dhiirigalin ah ayaan helayaa inaan sameeyo.
Jun 25, 2007 at 10: 45 PM
Macmacaanka waxaad kala dooran kartaa inta udhaxeysa 100 baakidh oo fudud oo ay ugu adeegi karaan maddiibado yar yar si ay ugu muuqato wax badan…
Jun 26, 2007 saacadu markay ahayd 5:37 AM
Mar kasta oo aan booqdo Mareykanka waxaan dul dhigaa nus dhagax hal toddobaad gudihiis. Waxaan ka soo shaqeeyay NY muddo 3 toddobaad ah (oo ku saabsan cinwaanka daahfurka GBA) waxayna lahaayeen cabitaan lacag la'aan ah markii aan dalbaday qayb weyn waxaan helay muuqaalo qosol badan, way soo jeesatay waxaanan ku dhaartay inay quudin lahayd qoys ka kooban 5!
Waan jeclahay cuntada laakiin midigtaada Doug waa sababta oo ah cabirradooda oo aad u ballaaran ayaa keenaya waxsii sheegis iskiis ah.
Laakiin waa inaan dhahaa runtii waan u xiisay Twinkies! ilaahay waa kuwo balwad leh. Laakiin rootigaagu wuu nuugaa, ma rooti qolof ah? waa maxay waxaas oo dhan?
Jun 26, 2007 saacadu markay ahayd 8:09 AM
Roodhi qolofti aad ayey u adag tahay in la helo! Waxaan qabaa Panera Kibistii waa tallaalka ugu dhow super dukaamada waawayn uun nuugaan.
Ka fogow kuwa Twinkies ah! Waxaan u maleynayaa inay hayaan sirta meydka qadiimiga ah!
Jun 26, 2007 saacadu markay ahayd 5:52 AM
Gebi ahaanba waan ku raacsanahay! Marar badan ayaan tan ka fikiray naftayda laakiin weligay kuma fikirin inaan haysto makhaayad gebi ahaanba u heellan hal adeeg (fikrad weyn). Adiguna waxaad isku bogga tihiin aniga. Xitaa dan kama lihi haddii makhaayadu iga qaado qiimo la mid ah kan cuntada ka buuxo. Kaliya wax yar oo cunto ah isii!
Jun 26, 2007 saacadu markay ahayd 9:27 AM
Waxay u egtahay inaad noqon karto afhayeenka xiga ee tareenka dhulka hoostiisa mara, ama maya. Dhab ahaan, waa la igu ogaa inaan miisaanka ka dejiyo 30 rodol oo dhaafsiisan. Laakiin waligay makhaayadu kama cuni doonto makhaayadaada. Waxaan u shaqeeyaa si aan u lumiyo culeyska guriga. Markii aan baxayo, sharciyada oo dhan ayaa albaabka bannaanka ka ah. Ku raaxeystay waqti.
Jun 26, 2007 at 12: 53 PM
Dhibaatadaydu waa mid xiiso leh maalin kasta, Lewis! 🙂
Mid ka mid ah dhibaatooyinka halkan ka jira Indy ayaa ah inaan ka dheregno maqaayadaha silsiladaha iyo dukaamada waaweyn. Kama fikiri karo 'bakhaar geeska' leh cunto cusub oo aan ka qaadan karo casho caafimaad leh oo aan ku kariyo habeenkaas. Iyo - silsiladaha oo dhan, kuma dhowaad makhaayado takhasus gaar ah leh.
Runtii waan u xiisay makhaayadaha khudradeed ee waaweyn ee ku yaal Galbeedka kuwaas oo ahaa 'Hooyo & Pop' halkaas oo aad ka heli karto cunno macaan oo leh qaybo dhexdhexaad ah. Iyagu ma ahayn kuwo qaali ah, sidoo kale.
Waa wax aan ku qasbanahay inaan xabadda ku qaniino oo aan dhiirrigeliyo. Cudur daarro nagu filan! Waan samayn karaa haddii aan isku dayo.
Nathania Johnson - Fadhiga Filimka Loogu Talo Galay
Jun 26, 2007 saacadu markay ahayd 9:50 AM
Markii cuntada Atkins ay ahayd mid aad u weyn, waxaan fikrad ka haystay makhaayad yar-yar oo carb ah. Waxay soo bandhigi laheyd balastar leh digaag, kalluun, iyo steak laakiin halkii aad ka heli lahayd shiilan faransiis, waxaad heli laheyd ulo karooto ah. Waxay u adeegi laheyd oo keliya Cunnooyinka cuntada, khamriga, biyaha (ma leh cabitaanno sonkor leh). Iyo macmacaanka, waxaad heli kartaa berry oo lagu qasay kareemo la kariyey.
Waxaan sidoo kale lahaa fikrad, oo aan u maleynayo in hadda la sameynayo, oo loogu talagalay safar dalxiis. Waxaad ku safraysaa safar dalxiis, halkaas oo wax walba ay yihiin kuwo loo dhan yahay. Oo waxay leedahay oo keliya cuntooyin caafimaad leh. Waxaad la kulmi kartaa khabiirada nafaqada iyo tababarayaal isla markaana ama aad bilaabi kartaa ama dayactiri kartaa cuntadaada. Waxaan u maleynayaa in fasaxyadu ay yihiin waqti dadku ku kala boodaan cuntada, marka tani waxay noqon laheyd wado looga baxsado adoon meel ku dhicin.
Jun 26, 2007 at 6: 43 PM
Uma baahnin inaan ka walwalayo qaybo culus oo ka mid ah maqaayadaha ku yaal culeyska culeyska b / c Waxaan nasiib u yeeshay inaan si dhaqso leh u shiido. Si kastaba ha noqotee, cunista qaybo aad u tiro badan oo raashin ah waxay iga dhigeysaa mid caajis badan oo hurdo la'aan ah. Si aan u xaliyo dhibaatadan waxaan inta badan weydiistaa saxan dheeri ah, oo ka mid ah taarikada cuntooyinka, waxaanna u guuraa qaybo ka mid ah cuntada saxankan oo ka cun. Haddii aan wali gaajaysanahay wax badan ayaan ka heli karaa saxankeyga "adeeg". Waxaan kaliya ku daaweeyaa saxanka cuntada ee la i siiyay sidii saxan wax lagu cuno waxaanan arkaa inay badanaa haystaan ​​ku filan oo aan ku qaato guriga ugu yaraan hal cunto oo dheeri ah.
Jun 26, 2007 at 11: 23 PM
Qaab kale oo tan loogu shaqeyn karo waa in telefishinnada makhaayadaha la dhigo kanaalka duurjoogta… kani wuxuu igu dhacay meel Tai ah oo aan jeclahay inaan tago. Waxba ma dili doono rabitaanka cuntada ka dhakhso badan inaad daawato bahal gorgor ah oo bakhtiga doofaarka ku jira intaad isku daydo inaad cuntid…
Jun 28, 2007 at 2: 23 PM
Runtii waxaan hayaa fikrad kale oo cajiib ah. Waxaan jeclaan lahaa asal ahaan inay jiraan silsilad madax-bannaan oo qaran oo ka mid ah maqaayadaha ilaaliyayaasha miisaanka. Gebi ahaanba halkaas ayaan ku cuni lahaa. Haddii aan aadi lahaa makhaayad garaneysa sida loo kariyo cuntada si sax ah iyadoo la raacayo Nidaamyada dhibcaha lagu taliyay Waxaan u maleynayaa in waddankan uu lumin karo kumanaan rodol daqiiqaddii.
Waxaan lumiyay ilaa 10 rodol oo ku saabsan miisaanka ilaaliyayaasha waxaanan u maleynayaa in haddii ay ikhtiyaarkaas heli lahaayeen aan xaflado dhalasho carruurteyda ah halkaas ku yeelan lahaa (markaan haysto) si ay ugu raaxaystaan ​​cunno dhab ah oo aan dufan lahayn ama dufanku yar yahay inta lagu jiro xafladaha. maya nacnac & keeg iyo hamburgers dufan leh oo ka yimid Mc Donalds, sidoo kale waan jeclaan lahaa qaybta carruurta.